एक नर्स र दुई पत्रकारसहित बीरगंजमा ८५ सङ्क्रमित, अस्पतालमा ठाउँ अभाव – Mero Pradesh TV
एक नर्स र दुई पत्रकारसहित बीरगंजमा ८५ सङ्क्रमित, अस्पतालमा ठाउँ अभाव
वीरगञ्ज स्थित नारायणी अस्पतालमा रहेको आइसोलेसन वार्डमा काम गर्ने एकजना छत्तीस वर्षीया स्टाफ नर्समा कोरोना सङ्क्रमण भएको पुष्टि भएपछि अस्पतालमा कार्यरत अन्य सबै स्वास्थ्यकर्मी त्रासित छन् । बुधबार साँझ परीक्षणमा पोजेटिभ देखिएका तीन जनामध्ये एकजना स्टाफ नर्स रहेकी अस्पतालले जनाएको छ ।
पछिल्लो पटक गरिएको परीक्षणमा उनको रिपोर्ट पोजिटिभ आएको छ । यसअघि दुईपटक गरीएको परीक्षणमा कोरोनाको सङ्क्रमण नदेखिएको अस्पतालका मेसु डा. मदन उपाध्यायले जानकारी दिए ।
अस्पतालमा कोरोना सङ्क्रमितको सख्या बढ्दै गएपछिे पेडियाट्रिक विभागमा कार्यरत ती स्टाफ नर्सलाई अस्पतालको आइसोलेसन वार्डमा खटाइएको थियो ।
पर्सा जिल्लामा एक स्टाफ नर्स र दुईजना पत्रकारसहित कोरोना सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८५ पुगेको छ । पर्साको सदरमुकाम वीरगञ्ज लगायत विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमासमेत सङ्क्रमित फेला परेका हुन् । पहिले वीरगञ्जमा मात्र पुगेको कोरोना ग्रामीण क्षेत्रमा समेत पुगेको छ । पर्सामा ५७ जना नयाँ सङ्क्रमित भेटिएसँगै सङ्क्रमितको सङ्ख्या ८५ पुगेको हो ।
बुधबार राती सवा १० बजे सङ्क्रमित पुष्टि भएका १८ जनालाई अस्पतालमा स्थान नभएका कारण शुक्रबार बिहान यथास्थानकै क्वारेन्टाईनमा राखिएको छ । सङ्क्रमणको पुष्टि भएका १८ जनालाई भने अस्पताल नलगिएकाले केही क्वारेन्टाईनमा छन भने केही आफ्नै घरमा अलपत्र परेका छन।
‘पहिलेदेखि नै ६९ जना सङ्क्रमित ल्याएर राखिसकिएको अस्पतालमा थप सङ्क्रमित राख्ने ठाँउ नै छैन । आइशोलेशन वार्डको क्षमता ७० शैयाको मात्रभएकाले । थप संक्रमित राख्न नसकिने अस्पतालका मेसु डा. मदन उपाध्यायले बताए ।
विराटनगरमा दश रुपैयाँमा भरपेट खाना खुवाउने अभियान लोकप्रिय बन्दै
समाजसेवी साहले विपन्नका लागि राहत सामग्री वडा अध्यक्षलाई हस्तान्त्ररण गरे
जनकपुरमा कागजले बेरेर फालिएकोे शिशुको शव फेला
सरकारले लकडाउनको अबधि फेरि थप्यो